Global Voices teny Malagasy » Alavoly Mahatsikaiky Miaraka Amin’ny mèmes Tenifototra Japoney · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Aogositra 2011 9:18 GMT 1	 · Mpanoratra Tomomi Sasaki Nandika Candy
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Fiteny, Hehy, Zavakanto & Kolontsaina
Tamin'ny herinandro izay nanoloran'i Twitter ny fahafahan'ny tenim-pirenena Japoney mampiasa tenifototra, nanao tahaka ny andevolahy nahita fotsimbary ny tontolon'ny Twitter Japoney.
Hatramin'izao dia tenifototra anglisy foana no nampiasaina tanaty tweets Japoney, izay azo nampiasaina ho azo potsirina na sivana amin'ny fikarohana atao. Mazàna dia tsy nanome ny manodidina manokana ambadiky ny hetsika na anarana fampielezan-kevitra an'iny bitsika iny izany.
Ny sasany dia mandinika fa avadiky ny tenifofotra Japoney ho fitobatobahana ohgiri  i Twitter, karazana kilalaon-teny izay avy amin'ny fomba fitantarana angano rakugo  fahiny . Mifaninana amin'ny fanomezana valinteny lalina indrindra ireo mpandray anjara, momba ny lohahevitra fohy iray.
Milaza  i Wordsmith Hideaki Matsunaga hoe:
Maro ny olona no mahita ny laharam-baovaony feno tweet ohgiri. Mipoitra isanandro ny lohahevitra izay tokony hovaliana, tahaka ny hoe “Tovano amin'ny teny hoe ‘vady an-trano manahirana”’ ny sarimihetsika iray fahita matetika dia mivadika ho sarimihetsika mampanonofy vetaveta ”.
Manome fanazavana maro avy amin'ny fomba fijery ara-pototry ny teny izy, ary milaza fa ny antony lehibe dia mety hoe raha ampitahaina amin'ny tenifototra voasoratra amin'ny alfabeta, ny tenifototra Japoney dia mora avadika ho fehezanteny :
Ilaina ny elanelana rehefa mampiasa alfabeta nefa hanapatitaka ny tenifototra izany. Azonao atao ny mampitohy ireo teny tsy misy elanelana, tahaka ny #followmejp na ny #londonriot, nefa voafetra ho an'ny teny roa na telo ihany izany. Azonao atao koa ny mampiasa ny tsipika ambany, tahaka ny hoe #where_we_come_from”, nefa miverimberina izany ary mametra ny isan'ny litera azo ampiasaina.
Amin'ny lafiny iray ny tenifototra Japoney dia mety ho fehezanteny iray manontolo. Midika izany fa ny tenifofotra dia mety hanehoana zavatra tahaka ny hoe “Soloy ny teny iray anatin'ny lohatenin'ny boky amin'ny teny hoe “fanalavana” dia ho lasa tantara mampalahelo izany”, mijanona ho Japoney mahazatra izany.
Hetsika Ohgiri nalain'ny mpampiasa Flickr raccoflickr
Indreto misy “mème” telo (zavatra malaza miverimberine amin'ny aterineto) lohahevitra nironana tany Tokyo nandritra ny andro iray na roa.
“Fantatrao hoe “mpanome endrika – na designer” ianao rehefa“ (#デザイナーあるある )
Nisy mème “aru aru” (fantatrao rehefa) maro, izay niarahan'ny olona nifaly tamin'ny fitserana na fifanakalozana fahatsiarovana iraisana. Tamin'ny faran'ny volana Jolay, nahazo ny anjarany koa ny mpamorona sary sy vohikala ary nizara ny tsy nety andavanandro, tanaty tweets marobe.
“Eto?” “Ah, tianay hivoaka tsara ilay izy.” “Ary ity?” “tianay hivoaka tsara koa io.” “Ary eto ary e?” “Io koa” “Tsy ity kosa e?” “Tsy maintsy atao miavaka.” #FantatraoHoeDesignerIanaoRehefa #YouKnowYoureADesignerWhen
Fehezanteny diso io. Fehezanteny diso io. Fehezanteny diso io. Fehezanteny diso io. Fehezanteny diso io. Fehezanteny diso io. Fehezanteny diso io. Fehezanteny diso io. #YouKnowYoureADesignerWhen.
Tokugawa Ieyasu, "shogun" (andriana japoney) voalohany nandritra ny vanimpotoana faha-andriana Tokugawa
Bitsika mahazatra tamin'ny vanim-potoana Edo  (#江戸時代のTwitterにありがちなこと )
Mety ho tahaka ny ahoana ny media sosialy nandritra ny vanim-potoana Edo (1603–1868)?
Mety ho nampiasa Foursquare ny lehilahy hividianana tapakila any amin'ny faritry ny jiro mena  (toerana feno mpivaro-tena) :
Aty amin'ny Fokotanin'ny jiro mena aty Yoshiwara aho (1-2-3 Edo Nihonbashi).
Nanana anjara tamin'ny fanovàna ny zava-bita tsara indrindra ho an'ny Tweet isan-tsegondra i Japana ho an'ny hetsika mampientanentana  maro, ary hatramin'ny nadravan'ny afo an'i Edo indray (Tokyo ankehitriny) ….
Iray tamin'ireo bitsika nalaza indrindra no niresaka momba ny Tranga tany Honnō-ji , izay naneren'i Akechi Mitsuhide an'i Oda Nobunaga hamono tena. Efa ela talohan'ny vanim-potoana Edo izany tranga izany, fa tsy nampiova hevitra ireo mpibitsika!
Nobunaga: “Aty Honnō-ji aho izao!” Mitsuhide: “Miandry any Honnō-ji ny fahavalo!”
Ity iray ity mampahatsiahy ny resaka tamin'ny Komodaoro Perry, tonga tany amin'ny morontsiraka Japoney niaraka tamin'ny sambo mpiadiany  mba hanokatra ny firenena.
本人からRT来たｗｗｗｗ RT @ペリー Hello 🙂 RT やべぇｗｗｗｗ黒船来たｗｗｗｗ #江戸時代のtwitterにありがちなこと
Ity dia RT (Avy amin'ny mpamoaka lahatsoratra: famerenana mandefa bitsika nalefan'olon-kafa) avy amin'i Perry tenany ihany! RT @Perry Miarahaba 🙂 RT Kiii tazako ireo sambo mainty!!!!!
“Soloy teny hoe “Udon” ny teny iray anaty lohatenina sarimihetsika dia lasa Kagawa izany sarimihetsika izany” (#タイトルの一部をうどんにすると香川が舞台になる )
Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr alkuden
Ny prefektioran'i Kagawa dia fanta-daza amin'ny udon (paty vita amin'ny varimbazaha). Sady maneho ny reharehan'ny any an-toerana ireo mpibitsika no manome kolotsaim-bahoaka.
Udon ao amin'ny Tiffany
Ny Udon tsy manam-petra
Udon eo amoron-tevana akaikin'ny ranomasina
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/08/17/21087/
 sarimihetsika mampanonofy vetaveta: http://www.nikkatsu.com/en/library.html
 faritry ny jiro mena: http://en.wikipedia.org/wiki/Yoshiwara
 hetsika mampientanentana: http://www.guardian.co.uk/football/2011/jul/18/womens-world-cup-twitter-record
 Tranga tany Honnō-ji: http://en.wikipedia.org/wiki/Incident_at_Honn%C5%8D-ji
 sambo mpiadiany: http://www.japan-guide.com/e/e6301.html